Wararka Xanta Suuqa Kala Iisbiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Maanta: David Alaba Oo Real Ku Biiraya Iyo Qodobo Kale
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: David Alaba oo Real ku biiraya iyo Qodobo kale
February 4, 2021 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa ka dhigay daafaca reer France ee RB Leipzig Dayot Upamecano, 22, iyo daafaca dhexe ee Bayern Munich Jarmalka Niklas Sule, 25, bartilmaameedkiisa ugu sareeya xagaagan. (Bild)
Sule ayaa qandaraaskiisu dhacayaa sanadka soo socda, tababaraha Bayern Hansi Flick ayaa sheegay inay ku xiran tahay daafaca inuu go’aansado “halka uu mustaqbalkiisa ku arko”. (Metro)
Borussia Dortmund ayaa dooneysa inay hoos u dhigto qiimaha ay ku dooneyso 20 jirka reer England Jadon Sancho oo ay ku dooneyso 20 milyan ilaa 88 milyan ginni si ay dib ugu soo celiso xiisaha ay u qabto Manchester United . (Bild)
Real Madrid ayaa heshiis afar sano ah la gaadhay 28 jirka reer Austria ee David Alaba kaas oo ka ciyaari kara daafaca ama khadka dhexe kaas oo qandaraaskiisa Bayern Munich dhici doono xagaaga. (Marca)
Weeraryahanka reer Denmark ee kooxda Barcelona Martin Braithwaite, oo 29 jir ah, ayaa diiday xiisaha West Bromwich Albion bishii Janaayo si uu ugu sii nagaado Nou Camp. (Sports.es)
Arsenal, Tottenham iyo Southampton ayaa xiiseynaya saxiixa daafaca reer France Evan N’Dicka, oo 21 jir ah, kaasoo ka yimid Eintracht Frankfurt. (Bild)
John Terry iyo Patrick Vieira ayaa kamid ah shaqsiyaadka loolanka ugu jira shaqada Bournemouth kadib markii shaqada laga ceyriyay Jason Tindall. (dialymail)
Huddersfield ayaa wadahadalo kula jirta saxiixa 30 jirka weerarka ka ciyaara ee reer Senegal Oumar Niasse kaas oo ah wakiil xor ah kadib markii ay ka fasaxday kooxda Everton dhamaadka xilli ciyaareedkii hore. (thesun)
Manchester United, Everton iyo Southampton ayaa u dhaqaaqay saxiixa Goolhayaha Celtic ee 17 jirka ah ee reer Scotland Vincent Angelini, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Tuttomercatoweb)
Manchester United ayaa qandaraaskii ugu horreeyay ee xirfadeed kula heshiisay 17-jirka garabka ka ciyaara ee reer England Shola Shoretire, iyadoo ay xiiseynayaan kooxaha Paris St-Germain, Barcelona, ​​Bayern Munich iyo Juventus. (Dailymail)
Tababarihii hore ee kooxaha Chelsea iyo Juventus ee Maurizio Sarri ayaa u weecday qaabkii uu ku noqon lahaa tababaraha cusub ee kooxda Marseille . (Sky Sports)
Weeraryahanka Real Madrid Karim Benzema ku laabashada Lyon waxay kuxirantahay natiijooyinka kooxda reer Spain. 33 jirka reer France ayaa ka tagay Lyon kuna biiray Real sanadkii 2009. (Marca)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England ee Arsenal Joe Willock oo 21 jir ah ayaa sheegay inuu heshiis amaah lix bilood ah ugu saxiixay kooxda Newcastle sababtoo ah waxa uu kala hadlay tababare Steve Bruce wicitaan muuqaal ah (Chroniclelive)
New York Red Bulls ayaa heshiis la gashay kooxda Celtic si ay ula soo saxiixato 19 jirka garabka ka ciyaara ee reer Mareykan Cameron Harper. (Daily Record)